Zvakasiyana - ndinobva kuMac | Ini ndinobva kuMac (Peji 4)
Safari yekuwedzera kunze kweMac App Store inomira kushanda paMacOS Catalina. Vagadziri vanoongorora kana kuendesa kune iyo Mac app chitoro
«Apple Kadhi iri pano» chiziviso chitsva cheApple kadhi
Chiziviso chitsva chakaburitswa neApple pane yayo YouTube chiteshi. Mune ino kesi, Apple kiredhiti kadhi ndiyo protagonist yacho.
Acronis Yechokwadi Mufananidzo 2020 iri pano ku backup kune iyo gore
Acronis Yechokwadi Mufananidzo 2020 inosvika ku backup kune gore uye kuita mamwe epamberi marongero kupfuura Time Machine
Dzidza Kwekupedzisira Kucheka Pro X neYuTuber iJustine
Dzidza Kwekupedzisira Kucheka Pro X neYouTuber iJustine, rimwe nerimwe rematanho ekushomeka kwekufambisa kwekushandisa, panguva imwe chete yaunoita chirongwa
Logitech inotangisa iyo MK470 Slim Combo, compact uye Ultra-yakatetepa keyboard uye mbeva
Logitech inosvitsa nyowani keyboard uye mbeva ine minimalist maitiro. Iyo MK470 Slim Combo Combo
Apple inogadziridza doko rayo kuti rienderane ne4K uye HDR
Apple inogadziridza doko rayo kutsigira 4K uye HDR pachiteshi cheHDMI. Ichi chishandiso chinoenderana neiyo Pro Pro
Izvi ndizvo zvinogona kuitika zveiyo 16-inch MacBook Pro
Izvi ndizvo zvinogona kuitika zveiyo 16-inch MacBook Pro. Ichave ne9th chizvarwa processors uye dhizaini nyowani.
FileMaker akaberekwazve saClaris
Nhau dzakakosha kune vashandisi veFayileMaker ndeyekuti inovandudza masevhisi ayo uye inonzi zita Claris.
Intel Inotangisa 10-Nanometer XNUMX-Generation "Ice Lake" Ma processor
Intel inosvitsa 10-nanometer yegumi chizvarwa "Ice Lake" processor. Yakagadzirwa neakatsanangurwa anodiwa nema Macs aripo.
Tariffs Mac Pro, MacBook Pro 16 ″ uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Takapinda muna Nyamavhuvhu nechisimba uye isu tatova nechinyorwa chekutanga chemwedzi uno nenhau dzinonyanya kukosha dzevhiki muApple world.
Yechina macOS Catalina yeruzhinji beta yave kuwanikwa
Beta yechina yeMacOS Catalina yave kuwanikwa kune vese vashandisi vari chikamu cheApple yeruzhinji beta chirongwa.
Apple Pay iri kudya pasi kune masevhisi akakosha sePayPal
MuApple ivo vanotora chifuva chekuitwa uye kugadzirisa muApple Pay. Iri sevhisi rinotodarika PayPal yekubhadhara.
Chii chekutarisira kubva kuApple yemhedzisiro yezvemari yekota yechitatu
Chii chekutarisira kubva kuApple yemhedzisiro yezvemari yekota yechitatu. Vaongorori vanotarisira kudzokorora zvakabuda gore rapfuura.
Apple Music yemahara kuyedzwa inogona kupfupikiswa kumwedzi mumwe chete
Iyo Apple Music yemahara kuyedzwa inogona kupfupikiswa kune imwechete mwedzi. Zvinoenderana neruzivo rwekushambadzira mureza webasa pane iyo Apple webhusaiti
Pixelmator Pro inogadziridza uye inosangana muMifananidzo yeMac sekuwedzera
Pixelmator Pro inogadziridza uye inosangana muMifananidzo yeMac sekuwedzera. Kugadzirisa ikozvino kuri kukurumidza nekuda kweiyo.
Wongorora ma backups ako usati waisa macOS Catalina
Wongorora ma backups ako usati waisa macOS Catalina. Zvese zvirongwa uye kuuraya zvakafanana neTime Machine.
"Kumashure kweMac" uye "Shot pa iPhone" yakadomwa pa 71 Emmy
Apple inogamuchira mamwe mazita eEmmy Awards egore rino. Iyo kambani inosarudzwa kune akati wandei mapfupi uye carpool karaoke
2nd Quarter Mac Kutengesa Kufungidzira Kune Zvimwe Zvinopesana
Iko yechipiri yekota Mac kutengesa inofungidzirwa yakasanganiswa. Kune imwe kambani kota yakaderedzwa, kune imwezve maMacs anotengeswa.
Iyo nyowani base modhi MacBook Pro iri 83% nekukurumidza kupfuura yaakatangira
Iyo itsva base modhi MacBook Pro iri 83% nekukurumidza kupfuura yaakatangira, ichishandisa ese mana ayo macores.
Yakagadziriswazve 2019 iMac inoonekwa muUS Apple Store
Yakagadziriswazve 2019 iMac yakanyorwa muUS Apple Store Kusvika pamamodeli makumi mapfumbamwe anowanikwa Vanotarisirwa muEurope munguva pfupi.
MacOS 10.14.6 Mojave yechina beta yakaburitswa yevanogadzira
Apple inosunungura iyo yechina beta ye macOS 10.14.6 Mojave yevanogadzira. Inotarisa kugadzirisa bugs inowanikwa mune macOS 10.14.5 Mojave
Xiaomi anonyatsoba chiziviso kubva kuApple kuratidza yake nyowani "Mimoji"
Xiaomi angadai akatora zvachose chimwe chezviziviso zveApple mune yayo yekupedzisira kuratidza kuratidza yayo nyowani "Mimoji" pane Xiaomi Mi CC9, tsvaga!
Eve zvishongedzo zvichawedzerawo kubatana kweBluetooth
Gadzirira Mac yako kusvetuka kubva pamakumi matatu nematatu kusvika makumi matanhatu nematanhatu kunyorera kubva kuMacOS Catalina (I)
Gadzirira Mac yako kusvetuka kubva pamakumi matatu nematatu kusvika makumi matanhatu nematanhatu kunyorera kubva kuMacOS Catalina (I). Tichaona kuti ndeapi mafomu asingaenderane nhasi.
Apple inogadziridza Keynote, Mapeji uye Nhamba dzeMacOS nezvakawanda zvitsva
Apple inogadziridza Keynote, Mapeji uye Nhamba dzeMacOS ine zvakawanda zvitsva maficha uye kusangana pamwe nezvimwe zvinoshandiswa seMifananidzo
Podcast 10 × 34: Mwaka wekupedzisira kuongorora Apple nhau
Tinokusiyai nechikamu chekupedzisira che # podcastapple mwaka mune odhiyo. Tichadzoka nekukurumidza kupfuura zvaunotarisira.
Apple inoburitsa yechipiri beta ye macOS Catalina 10.15 yevagadziri
Apple inoburitsa yechipiri beta ye macOS Catalina 10.15 yevagadziri. Iyi beta inopukuta zvikanganiso zvekutanga zvakawanikwa nevagadziri
Apple inoburitsa macOS Mojave 10.14.5 chigamba kugadzirisa Boot Camp nyaya pane Fusion Drive makomputa
Apple inoburitsa macOS Mojave 10.14.5 chigamba kugadzirisa Boot Camp nyaya paFusion Drive makomputa anokanganisa zvisikwa
Twitter yemacOS yadzoka nekuda kweiyo Catalyst chirongwa
Twitter yemacOS yadzoka nekuda kweiyo Catalyst chirongwa. Iyo itsva vhezheni ichaunza iwo akafanana mashandiro seimwe imwe vhezheni ye Twitter
Apple inosimbisa kunyangarika kweDashboard muMacOS Catalina
Apple inosimbisa kunyangarika kweDashboard muMacOS Catalina. Iri desktop rave riripo kubvira OS X Tiger uye Apple inoibvisa mushure memakore gumi nemana
BetterTouchTool 3 inosvika iine chimiro chitsva chose
BetterTouchTool 3 inosvika iine chimiro chitsva chose. Iwo maficha akafanana neshanduro dzapfuura.
Iyo Mac Pro ine inokurumidza SSDs inoonekwa muMac?
Iyo Mac Pro ine inokurumidza SSDs inoonekwa muMac? Kuenzaniswa neMac Pro, madhiraivha ayo anononoka, asi ndangariro dzinogona kuchinjwa
Iyo Mac Pro ichaisa isinganzwisisike Thunderbolt 3 tambo
Iyo Mac Pro inoratidzira isinganzwisisike 3- uye 2-mita Matairbolt 3 tambo. Iyo 2 mita tambo inokwanisa kuendesa kusvika ku40 Gbps.
Iyo "Sidecar" ficha yekushandisa iyo iPad seyechipiri skrini inogumira kune maMac achangoburwa
Iyo "Sidecar" ficha yekushandisa iyo iPad seyechipiri skrini inogumira kune maMac achangoburwa. IPads inotsigira iOS 13 inotsigirwa.
macOS Catalina inoisa system mafaira pane yekuverenga-chete chikamu
MacOS Catalina inoisa mafaera esisitimu pane yekuverenga-chete chikamu. Nenzira iyi zvirinani "nhoo" maitiro ekurwisa hacker
Apple ichaenderera mberi kutengesa mimhanzi nemavhidhiyo kunyangwe kufa kweTunes.
Apple ichaenderera mberi kutengesa mimhanzi nemavhidhiyo kunyangwe kufa kweTunes. Parizvino iTunes Media zvemukati zvichaendeswa kune iwo matsva maapp
Isu pakupedzisira tichava neMac Pro nyowani uye iri modular
Isu pakupedzisira tichava neMac Pro nyowani uye iri modular. Izvi zvinotibvumira kuti tione kusvika pamweroi icho chishandiso ichi chinokwidziridzwa, sezvatichaona gare gare.
Goverana mimhanzi pane chako chishandiso neimwe iPhone yemumwe mushandisi
Goverana mimhanzi pane chako chishandiso neimwe iPhone yemumwe mushandisi.
Kudzokera kuMy Mac hakuzove kunowanikwa muICloud mune dzese shanduro dzeMacOS kutanga muna Chikunguru
Kudzokera kuMy Mac hakuzove kunowanikwa muICloud mune dzese shanduro dzeMacOS kutanga munaJune, zvinoenderana negwaro remukati kubva kuchishandiso.
Chekutanga mifananidzo yenharaunda dzeMcEnery Convention Center muSan José
Mifananidzo yekutanga yenharaunda dzeMcEnery Convention Center muSan José yatotanga kusvika
Pixelmator Pro ichave yakanyatsobatanidzwa muMifananidzo pane macOS
Pixelmator Pro ichave yakanyatsobatanidzwa muMacOS Mifananidzo mune vhezheni 1.4, iyo ichaburitswa mukupera kwaJune.
10 × 32 Podcast: Rimwe Svondo kuWWDC 2019
Isu tinosiya episode nyowani ye #PodcastApple kune vashandisi vanotevera isu uye kune avo vese vanotanga kuzviita nhasi
Movist inotangisa Pro vhezheni pane yayo webhusaiti kudzivirira izvo zvinorambidzwa zveMac App Store
Movist inotangisa Pro vhezheni pawebhusaiti yayo kuti idzivise zvinorambidzwa zveMac App Store. Iyi Pro vhezheni yemahara kana iwe uchibva kune yekutanga.
Tora screenshots neakagadziridzwa LightCapture app yeMojave
Tora screenshots neakagadziridzwa LightCapture app yeMojave. LightCapture inoteedzera iyo yakasarudzwa mufananidzo kune clipboard.
FileMaker 18 ye macOS inowanikwa nhasi ine akakosha maficha maficha
FileMaker 18 ye macOS inowanikwa nhasi ine yakakosha mitsva maficha ane chekuita neiyo interface, zvemukati kupinza uye kutumira kunze, uye chengetedzo
Musi wa20 Chikumi, Apple Store paPasseig de Gràcia muBarcelona yaizovhurazve
Chitoro paPasseig de Gràcia muguta reBarcelona chaigona kuvhura mikova yadzo musi wa20 Chikumi sekutaura
Iwo maApple Stores anotengesa 23,7-inch LG screen
Apple Stores yakanyarara inotengesa 23.7-inch LG screen. Iyo skrini haina kuoneka mune chero katarogu uye haina kufumurwa muApple Chitoro
Nyora yako Mac chiitiko neiyo nyowani Timemator application
Nyora yako Mac chiitiko neiyo nyowani Timemator application. Iyo inokutendera iwe kuyera iko kushandiswa kwefaira, kunyorera kana dhairekodhi nechitopwachi.
400 nzvimbo nyowani kuApple Developers Academy inoitika muNaples
400 nzvimbo nyowani kuApple Developers Academy yakaitirwa muNaples. Vatori vechikamu vanozove neyemahara iPhone neMac
Angela Ahrendts ajoina bhodhi revatungamiriri reAirbnb
Kusainwa kwaAngel Ahrendts kukambani yeAirbnb kunoitwa zviri pamutemo. Mune ino kesi, achabatana nebhodhi revatungamiriri vekambani
Sonos inowedzera rutsigiro rwemubatsiri weGoogle Assistant muUS
Sonos inowedzera rutsigiro rweGoogle Mubatsiri Google Mubatsiri muUnited States. Munguva pfupi iri kuuya kuzowanikwa mune dzimwe nyika
Podcast 10 × 30: Kugadzirira iOS 13 uye Idzva iPhones
Chikamu chitsva cheApple Podcast matinotaura nezve runyerekupe nezve iyo nyowani iPhone uye Apple's OS
Kwidziridzwa kune macOS 10.14.5 kudzivirira iyo ZombieLoad kunetseka kuri muIntel chips
Ndokumbirawo mugadzirise kune macOS 10.14.5 kudzivirira iyo ZombieLoad kukuvara kuri muIntel chips. Iko kunetseka kunofanana neMeltdown uye Specter
Mhinduro yeHP kuMacBook Kubata Bharu ihombe screen pamusoro pekhibhodi
Iyo HP Omen X 2S inotiratidza iyo hofori skrini pamusoro pekhibhodi, skrini inopa hukuru hukuru uye kuita kwakawanda kupfuura iyo Kubata Bhawa.
Lenovo anotora njodzi uye anotangisa folding laptop prototype
Iyo yakapeta laptop yeiyo skrini yatove neayo ayo prototype uye iyo femu inotarisira kuimisikidza yave iri Lenovo.
Iyi ndiyo mhinduro kana yako Apple ID ikamiswa
Iyi ndiyo mhinduro kana yako Apple ID yakaremara. Unogona kuziva nzira nhatu dzaunogona kushandisa Apple ID.
Kufanotaura kwaGurman, Tenga Apple Makambani, Apple Park Stage, uye nezvimwe. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Tinounganidza nhau dzakanakisa dzevhiki muSoy de Mac.Svondo rino ranga rizere nezvishamiso kubva musi weMuvhuro mumwechete kusvika nhasi Svondo
Iyo yeMusic app mune macOS 10.15 inochengeta iwo akakosha mashandiro eTunes
Iyo yeMusic application mune macOS 10.15 inochengeta iwo makuru mashandiro eTunes. Ichazotarisa pane kugoverwa kwemimhanzi, senge smart zvinyorwa.
Iyo Mac App Store inopa yechipiri kukanganisa mumwedzi
Iyo Mac App Store ine yechipiri kukanganisa mumwedzi. Mune ino kesi inokanganisa Mac App Store, iyo App Store uye iTunes Chitoro
Apple inoburitsa betas yechishanu yeTVOS 12.3, watchOS 5.2.1, macOS 10.14.5 yevagadziri
Apple inoburitsa iyo yechishanu betas yeTVOS 12.3, watchOS 5.2.1, macOS 10.14.5 yevagadziri. Apple TV chete ndiyo inoshandisa iyo app yeTV.
Satechi iMac USB-C Dock Ongororo: Dhizaini uye Mashandiro Go Go Ruoko Ruoko
Isu takaedza iyo Satechi USB-C dock yeMac, iyo mukuwedzera kwekusimudza iyo skrini inokupa iwe manomwe ekubatanidza madoko kumberi
Alfred 4, iyo vhezheni nyowani yeakakurumbira injini yekutsvaga inotarisirwa kusvika muna Chikumi
Alfred 4, iyo vhezheni nyowani yeakakurumbira injini yekutsvaga, inotarisirwa kusvika muna Chikumi. Iyo inouya nesimba rakawanda kana uchitsvaga uye uchienderana neOpenSearch
Iyo Mac App Store inounza matambudziko kune vamwe vashandisi. Kunyangwe Apple's System Mamiriro asingataure chero akakosha nyaya.
Iyo logo yeiyo nyowani bhasikoro nzira kuGerman inotaridzika zvakanyanya senge Apple, sekureva kwekambani
Apple inoda iyo nyowani bhasikoro nzira sevhisi kuGerman kuti isashandise yayo yazvino logo, logo yakafanana neApple, kunyangwe iine misiyano.
Podcast 10 × 28: Chenjera ivo vari kutiteerera
Chikamu chitsva cheiyo podcastapple iyo yatinogovana newe maonero uye nenhau dzazvino kubva kuApple uye tekinoroji yenyika. Iwe unyoresa?
Elgato inopa Dock nyowani ine mamwe madoko
Elgato inounza Dock nyowani ine mamwe madoko muPro vhezheni. Kusvika pamatanho gumi nemaviri, ayo anotendera iwe kuti uite chero imwe imwe yekubatanidza.
Luna Ratidza rinotipa iyo -yese-skrini MacBook pfungwa
Pfungwa dzinogamuchirwa nguva dzose kubva kwandiri kubva kuMac uye nhasi tinoda kukuratidza imwe yeLuna Display's ese-skrini MacBook
Apple inoburitsa yechina beta ye macOS 10.14.5 Mojave yevagadziri
Apple inosunungura iyo yechina beta ye macOS 10.14.5 Mojave yevagadziri. Hapana shanduko yekukanganisa inoonekwa kunze kwekuvandudzwa kwese kwenzvimbo
Wireless Beats Powerbeats Pro inosvika May 10 naSiri
Wireless Beats Powerbeats Pro inosvika May 10 naSiri uye iyo H1 chip. Ivo vanonyanya kuchinjirwa kurovedza muviri.
Apple inowedzera iyo Fundació Joan Miró miziyamu muBarcelona kuti ipe yayo Nhasi pazvikamu zveApple kwechinguva
Apple chinyararire inotangisa yayo Apple TV chiteshi paYouTube
Apple chinyararire inotangisa yayo Apple TV chiteshi paYouTube uye inoizadza nezviri mukati nematrailer, clip uye zvirongwa zvinotepfenyurwa neApple
Yoink inogadziridzwa ichibvumira kutora mukana weKuenderera Kamera pakati pemamwe mabasa
Yoink yakagadziridzwa ichikubvumidza iwe kutora mukana weKuenderera Kamera, iyo inokutendera iwe kupa zita kune inounzwa mafaera uye chengeta iyo faira mushure mekuiburitsa kunze
Iyo LG UltraFine 4k skrini haichisiri kutengeswa pawebhusaiti yeApple
Iyo LG UltraFine 4k skrini haichisiri kutengeswa pawebhusaiti yeApple. Pane kudaro, iyo 5K modhi ichiripo.
ToothFairy iyo application yekugadzirisa AirPods neMac yedu yakagadziridzwa. Iye zvino inotsigira Powerbeats Pro uye Powerbeats 3
Iyo Apple Watch ichashandiswa kuvhura chero Mac password mu macOS 10.15. Iyi ndeimwe yemashoko atakasangana nawo svondo rino.
Evernote yeMac vagadziri vanogadzirisa gomba rekuchengetedza
Evernote yeMac vagadziri vanogadzira gomba rekuchengetedza. Muchengeti wezvekuchengetedza Dhiraj Mishra akawana chikanganiso ichi ndokuchimhan'arira kukambani
Apple Music Zvidzoreso "Zvako Iwe" Nezviri nani Kurudziro
Apple Music inogadziridza "Yako" nemazano ari nani. Wedzera iyo "Yakagadzirwa kunyemwerera" kana "Kutanga nekukurumidza" runyorwa kuti unzwe zvakanakisa mune yega nguva.
NaClicker yemacOS unogona kutarisa Netflix uye kuitarisira kubva kuTouch Bar
NeClicker yeMacOS unogona kutarisa Netflix uye kuitarisira kubva kuTouch Bar.Iye zvakare ine epamberi mabasa ekugadzirisa yedu ruzivo.
MagSafe patent, tvOS inopokana Apple Watch uye zvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Zvekare tinokuunzira pfupiso nedzimwe dzenhau dzakakurumbira dzevhiki ino ndiri ini ndiri kuMac
Artificial intelligence ichakwanisa kugadzirisa mavara emufananidzo mune inotevera vhezheni yePixelmator Pro
Pixelmator Pro ndeimwe yesoftware inozivikanwa kwazvo munyika yekugadzirisa mifananidzo uye kuumbwa mu ...
Thomas Weinreich anotiratidza zano rekuti Split View mashandiro anogona kuvandudzwa uye kurerutswa kusvika pakakwirira
Rapper Wiz Khalifa kuratidzira "Behind the Cam" paApple Music musi waApril 17
Anokakavara rapper Wiz Khalifa kuratidzira "Behind the Cam" paApple Music musi waApril 17
Iyo inotevera vhezheni yeMacOS ichave yakazvimirira mimhanzi, podcast uye TV maapp
Iyo inotevera vhezheni yemacOS ichave yakazvimirira mimhanzi, podcast uye maTV maapplication, sekureva kwerunyerekupe rwakasimbiswa na5to9Mac
Podcast 10 × 26: Vhiki rekuchinja
Isu tinosiya chiitiko chitsva chePodcastapple matinotaura nezve dzimwe dzenyaya dzinonakidza kwazvo pasirese Apple
Ember inowedzera saizi yemukombe wako inoita kuti chinwiwa chako chinodziya
Iyo ember mug inochengeta kofi yedu kana tii pane tembiricha yakasarudzwa. Iye zvino ivo vanotangisa zvakare mukombe wakakura
Gadzira yako AirPods 2 mune makumi matanhatu mavara nekutenda kuColorWare
Gadzirisa yako AirPods 2 mune makumi matanhatu mavara nekutenda kuColorWare. Navo isu tine mamwe maAirPod epakutanga anozove godo revazhinji.
BBEdit inodzokera kuchitoro chekushandisa cheMac App Store. Iyo app irikufamba kuenda kunyoresi modhi uye inounza makuru makuru maficha.
Nyora maemail zvakananga muwebhumail nekutenda Vhura muWebmail
Nyora maemail zvakananga muwebhumail nekuda kweVhura muWebmail uye sarudza yako email kubva kune runyorwa rurefu rwemasevhisi
Dhizaini zvinyorwa uye manotsi app anouya kune macOS
Dhizaini zvinyorwa edhita application inouya kune macOS yemahara uye nekubatanidzwa kuburikidza neICloud kuwana kugadzirwa
Kuve neMac Pro ine 256GB ye RAM zvinoreva kutenga iyo RAM kubva kuApple
Kuve neMac Pro ine 256GB ye RAM zvinoreva kuitenga chete kubva kuApple, pamutengo we € 6240 yekuwedzera
Kukahadzika kwakawanda neruzivo rudiki: izvi ndizvo zvese izvo Apple zvisina kujekesa muchiitiko chayo "Inguva yekuratidzira"
Ko Apple yakajekesa zvese nezve ayo masevhisi matsva muKeynote "Inguva yekuratidzira"? Kwete, iyi ndiyo mibvunzo yakamutswa neApple Kadhi, Arcade, Channel uye TV +.
Podcast 10 × 24: Nhau +, Kadhi, cadeArcade uye TV +
Chikamu chevhiki ino cheApple podcast chave kuwanikwa. Iwe haugone kurasikirwa neizvi
Amazon's Chitubu inopa kutanga nhasi.Tora mukana wavo!
Amazon yatanga nhasi neyakaipirwa inopa uye izvi ndizvo zvimwe zvezvigadzirwa zvaunogona kuwana pamutengo
Chizvarwa chechina Apple TV yava kunzi Apple TV HD
Apple yakachinja zita rechina chizvarwa Apple TV, iyo yakapihwa zita rekuti Apple TV HD.
Apple Keynote mavhidhiyo, ave kuwanikwa paYouTube
Apple yakatoburitsa zviri pamutemo vhidhiyo dzakasiyana dzakaperekedza Keynote yayo "Inguva yekuratidzira" pane yayo YouTube chiteshi. Vazvizive pano!
IPads nyowani, iMac nyowani, nyowani maAirPod uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Inoyevedza svondo maererano nenhau dzakapihwa naApple pasina kuita chirevo chakakosha
Ikea naSonos SYMFONISK mutauri anouya muna Kubvumbi
Sonos naIkea kuvhura SYMFONISK smart speaker mwedzi unouya
Podcast 10 × 22: Isu tinoongorora chiitiko chinotevera munaKurume 25
Imwezve chikamu chePodcast yedu umo matinotaura nezve iyo Apple kiyi yakakosha pakati peimwe mimwe misoro yetekinoroji yazvino
Zviratidzo zveApple Nhau zvinowanikwa mune yazvino macOS Mojave beta
Zviratidzo zveApple News zvakawanikwa mune yazvino beta ye macOS Mojave, tichaona nhau idzo Apple dzichatizarurira kwatiri mune yakakosha yaKurume 25.
Ulysses 15 inosvika neyakaganhurwa mameseji hwindo uye keyword manejimendi
Ulysses 15 inosvika neyakaganhurwa mameseji hwindo uye kiyi kiyi manejimendi pakati pezvimwe zvakagadziriswa Tinogona kuyedza Ulysses gumi nemashanu kwemazuva gumi nemana
Bvisa zvakapetwa mapikicha kubva ku macOS mapikicha app
Bvisa zvakapetwa mapikicha kubva kuMacOS Mifananidzo app neiyo Mifananidzo Duplicate Cleaner app uye mune iyo Mifananidzo yakaputika folda.
Donald Trump anowana zita reApple CEO zvisirizvo uye anomudaidza kuti Tim Apple panzvimbo paTim Cook. Mhinduro yaCook kushandura zita rake pa Twitter
Apple inogadzirisa "nhanho mwenje" matambudziko chinyararire
Apple inogadzirisa "nhanho mwenje" matambudziko chinyararire. Apple ingadai yakawedzera tambo ye2018 MacBook Pro
Aya ndiwo maLaCie ekunze madhiraivha akaomarara aunogona kutenga kuApple Chitoro
Aya ndiwo maLaCie ekunze madhiraivha akaomarara aunogona kutenga muApple Chitoro, pamwe nezviitiko zvinovhara Mac yedu yese
Hapasisina ruzivo kana kudonha kwechiitiko cheKurume?
Pakarepo runyerekupe uye ruzivo rwekuratidzwa kweApple mumwedzi waMarch zvakamira uye hapana zvitsva zvitsva
Kurwiswa kwakaipa paMac kunogona kuuya kuburikidza neThunderbolt 3 chiteshi
Kurwiswa kwakaipa paMac kunogona kusvika kuburikidza neThunderbolt 3 chiteshi, kupihwa runyararo rwakaderera rwunodiwa kubatana uku uchienzaniswa neUSB-A
Zvimwe zvinoda kuziva kubva kumacOS Mojave yekumusoro skrini inoenderana nekugadzirisa mabhatani epeji repamba
Duel yeTitans: isu tinofananidza iyo nyowani Samsung Galaxy Buds inopesana neApple's AirPods
Iko nyowani Samsung Galaxy Buds yakakosha kutenga zvimwe kana maApple AirPod ari nani? Mukuenzanisa uku isu tinokuratidza zvakanakisa zveumwe neumwe.
Huawei MateBook Pro X, muvengi mutsva weMacBook Pro
Huawei MateBook Pro X iyo nyowani vhezheni yemakomputa kubva kuChinese firm. Yakapihwa paMWC ivo vanopa yakanakisa skrini uye yakanyatsogadzirwa Mac
Iyo modular dhizaini yeiyo nyowani Mac Pro inogona kureva akawanda madhiraivha pamusoro peumwe neumwe. Isu tinokuratidza vhidhiyo panowanikwa mukana uyu.
Iyo Samsung Galaxy Buds ndeyechokwadi uye ichaedza kusimuka kune iyo AirPods
Samsung yakazivisa nezuro masikati izvo zvinotarisirwa kuve vanokwikwidza maApple AirPods, iyo Samsug Galaxy Buds
Rimwezve vhiki tinounza podcastapple matino govana mazano edu nemi mese nezve Apple nyika. Svondo rino runyerekupe rwakabata
Iyi pfungwa inonakidza yeMacBook Pro nyowani ine Chiso ID
Mugadziri anotitaridza pfungwa inoshamisa yeiyo inotevera Apple MacBook Pro
Iyo BlackMagic Pro eGPU inoonekwa uye inonyangarika kubva kuApple Chitoro. Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti inopindura pakaputsika kwemasheya emugadziri.
Samsung yeBudget Buds yaizosvika kuzomira kuma AirPods
Iyo itsva Samsung Galaxy Buds inenge yakagadzirira kusangana neApple AirPods uye ichatangwa neChitatu chinotevera, Kukadzi 20
Nhoroondo yekubhurawuza yaSafari yakavhurika kune akawanda maapplication pane macOS Mojave
Nhoroondo yekubhurawuza yaSafari yakavhurika kune akawanda maapplication paMacOS Mojave, muongorori wezvekuchengetedza Jeff Johnson anowana
Barry Jenkins, mumwe wevanyori ve "Behind the Mac" anobhadhara mutero kuna James Baldwin
Barry Jenkins akaonekwa mumushandirapamwe we "Behind the Mac" anotaura nezvaJames Baldwin uye kukosha kwekugadzirisa matekinoroji matsva mufirimu.
Nyowani runyorwa rwezvipiwa mumusha otomatiki izvo Koogeek inoita kuti zviwanikwe kwatiri kwenguva shoma yekudzora imba yedu nekutarisira hutano hwedu
Iwe unosuwa MagSafe pane Mac ine USB-C? ThunderMag mhinduro
Iwe unosuwa MagSafe pane Mac ine USB-C? ThunderMag mhinduro yeazvino USB-C Macs.
Chitoro cheApple paPasseig de Gràcia chave kuvharwa
Nhasi, Muvhuro, Kukadzi 11, 2019, isu tatowana Apple Store muPasseig de Gràcia yakavharwa kuitira kugadziridza. Chitoro chichavhurazve mumwedzi mina
Apple yakapa vashandisi vane iyo Shazam app uye vakatevera iyo Grammy gala nezuro husiku kunyorera kwemwedzi mina-kwemahara kuApple Music
Tarisa uone Bill Stasior, Angela Ahrendts, yepamutemo macOS kugadzirisa, uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Muunganidzwa wenhau dzinonyanya kukosha pavhiki ndiri kubva kuMac. Pakati pavo, mhinduro yeFaceTime bug kana kuenda kwaAhrendts kubva kukambani
Wi-Fi kubatanidza mune macOS Mojave haichisiri inowanzo gadziridza
Wi-Fi kubatanidza mune macOS Mojave haichisiri inowanzo gadziridza. Tinogona kusarudza mune zvatinoda kana tichida iyo Wi-Fi kuti ibatane otomatiki.
Iye zvino unogona kuwana aya maBose mahedhifoni pamutengo usingadzivisike paAmazon: yakanakira Zuva reValentine
Iye zvino unogona kuwana iyo Bose QuietComfort 25 ine inopfuura 50% dhisikaundi kuburikidza neAmazon, iri zano rinoshamisa reZuva raValentine. Tora mukana we!
Iyo Euro 6000 network ichakurumidza kuve neApple Pay rutsigiro
Vashandisi vemakadhi emakambani eEuro 6000 vachakurumidza kuve nerutsigiro rwekubhadhara kuburikidza neApple Pay sevhisi
Podcast 10 × 18: Betas, mess neFacebook neGoogle, uye isu tichiri tisina FaceTime
Kuunza iyo podcastapple episode yatinotaura nezveFaceTime, kuenda kwaAngela Ahrendts kubva kuApple uye nedzimwe nhau zhinji.
Apple sezviri pachena yakatenga nzvimbo yekutengesa kuManhattan's Hudson Yards
Apple sezviri pachena yakatenga nzvimbo yekutengesa kuManhattan's Hudson Yards. Iyo purojekiti inogona kuwanikwa kuApple muchirimo
Apple inoburitsa yechipiri beta ye macOS Mojave 10.14.4 yevagadziri, vhiki mbiri chete mushure mekuburitsa macOS Mojave 10.14.3
Kuvandudzwa kweiyo iPod touch kungaite zvine musoro here nhasi? Pamwe, asi kwete sezvazvave kuita kusvika zvino
Zvingave zvine musoro here kuti kubva kuApple ivo vakavandudza iyo iPod touch? Pano ini ndinopa maonero angu pane izvi, uye kuti chizvarwa chechinomwe chinogona kururamiswa uye kuita zvine musoro.
Johny Srouji anogara, pusha iyo Mac Pro uye nezvimwe. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Zvekare isu tinoparura kuunganidzwa kwenhau dzakanakisa dzevhiki muNdiri kubva kuMac uye navo zvimwe zvakakosha zveApple
Apple inogadzirisa iCloud bug uko mubiridzi akawana ruzivo rwekuvanzika
Apple inogadzirisa iCloud bug iyo iyo yekuba yakawana ruzivo rwekuvanzika. Apple yakagadzirisa kukanganisa musi waNovember 23
Chidzidzo chitsva chinoratidza kuti tinoshandisa, paavhareji, anopfuura chikamu chechina chegore rega rega paInternet
Chirevo chazvino chekushandisa kweInternet pasirese chakatiratidza kuti tinoshandisa nguva yakawandisa online pamhepo, tsvaga pano!
Tim Cook anoti Apple ichatora chikamu mukuchinja kwe "terevhizheni mapakeji" izvo zvichaitika mumwedzi iri kuuya. Zvigadzirwa zveApple zvakagadzirira
Zuva rekuburitsa mhedzisiro yemari yeQ1 rasvika uye harisi iro zuva rakanakisa ratinotaura
Apple nhasi ine zuva rakaoma kwazvo kuendesa kumberi uye ndezvekuti nhasi vanopa mhedzisiro yeQ1 chaipo mushure memashoko eFaceTime bug.
Kugadzirwa kwegore ra2013 Mac Pro kwakanonoka nekuda kwekushayikwa kwezvikwiriso muUS.
Iyo 2013 Mac Pro yekugadzira yakanonoka nekuda kwekushayikwa kwezvikwiriso muUS Iyi nhau inouya iri pakati pegakava nezve kuburitsa mukati kana kunze kweUS.
Intel underformforms muchikamu nekuda kweApple
Intel underformforms muchikamu nekuda kweApple. Kukurudzira mumisika kunokanganisa Intel mukugadzira zvikamu zveApple
Chiziviso chitsva cheApple Bhadhara Cash Uye muSpain kuti riini Apple?
Kambani yeCupertino ichangotanga chiziviso chitsva chine chekuita neApple Pay Cash sevhisi uye isu tichakamirira kuti itangiswe pano
Ivo vanoona yakavanzwa macOS malware mushure mekurodha pasi kushambadzira
Ivo vanoona malware ye macOS yakavanzwa mushure mekuburitswa kwezviziviso zveiyo inozivikanwa Adobe Flash Player chirongwa mushure mekurodha pasi nekuisa iyo faira
10 × 16 Podcast: Mabhatiri, Upgrades uye Zvimwe
Imwezve vhiki takasiya vhidhiyo uye zvinongedzo kune podcastapple yatakaita neChipiri manheru matakataura nezve Apple uye zvishoma nezve zvese.
Kutsvaga mutauri anotakurika? Iye zvino une UE BOOM iri kutengeswa kuAmazon!
Iye zvino unogona kuwana UE BOOMs uye UE MEGABOOMs kuburikidza neAmazon ane anonakidza madhisiki, usarasikirwe!
Apple haisati ichienderana nemitemo yeEU pakudzivirirwa kwedata
Apple haisati ichienderana nemitemo yeEU pakudzivirirwa kwedata Sangano reAustria NGO rinoshandira Apple kutevedzera izvi.
Chengetedza Passeig de Gràcia, eGPU Pro Blackmagic, nyowani iPod Touch uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Sezvo Svondo yega yega tinounza pfupiso yenhau dzakakurumbira, runyerekupe uye kudonhedza mandiri ndiri kuMac maererano nenyika yeApple
Tiri zvakare kuzove neisina waya yekuchaja bhokisi reAirPods gore rino?
Runyerekupe nezve kugadzirwa kweiyo AirPower yekuchaja base inogona zvakare kuunza yechipiri vhezheni yeApple's AirPods
TweetDeck ye macOS inogadziridza ine yakasviba modhi
TweetDeck ye macOS inogadziridzwa ine yakasviba modhi uye "akawanda mabhugi" kugadzirisa. Icho chishandiso chakakwana cheMunharaunda Manager
Iyo BlackMagic eGPU Pro ichave ichiwanikwa kuti utenge mumaawa mashoma pawebhusaiti yeApple
Iyo BlackMagic eGPU Pro ichave ichiwanikwa kuti utenge mumaawa mashoma pawebhusaiti yeApple. Parizvino inowanikwa paUS Apple webhusaiti.
Czech Republic neSlovakia vachakurumidza kuve neApple Pay
Apple inoenderera mberi nekuwedzera kweApple Pay uye pakati pekupera kwaKukadzi uye kutanga kwaKurume ichasvika muCzech Republic neSlovakia.
Kufunga kutonga imba yako? NaKoogeek zvinogoneka uye nemari shoma kwazvo
Kana iwe uchitsvaga maitiro aungaita kutonga imba yako, nemaKoogeek zvishandiso haufanire kushandisa mari yakawanda uye unenge uine zvese zvingabvira zvaunogona kuita zvaunogona.
Chitoro cheApple muPasseig de Gràcia chichavhara kwenguva pfupi kubva muna Kukadzi 10
Kubva kuApple vanotiyambira kuti chitoro chavainacho muPasseig de Gràcia chichavharwa kwenguva pfupi kubva munaFebruary 10 chekugadzirisa.
Iyo AirPower yekuchaja base inopinda mukugadzirwa muna Ndira
Iyo AirPower yekuchaja base inopinda mukugadzirwa muna Ndira 21. Hapana chinhu chinozivikanwa panguva ino nezve yekuchaja bhokisi reAirPods
Apple Music inoburitsa yakasarudzika vhidhiyo paBohemian Rhapsody
Apple Music inoburitsa yakasarudzika vhidhiyo nezve Bohemian Rhapsody. Vhidhiyo yacho yakanzi Rami Malek: Kuva Freddie.
Cupertino anoronga kushongedza mapurisa eKorea nekuda kwekurohwa kwemanyepo
Aya ese materevhizheni anozove natively anoenderana neAirPlay yakaziviswa kusvika parizvino
Tsvaga pano apa ndeapi mamodheru eSmart TV kubva kuSamsung, LG, Sony uye Vizio ayo anozoenderana nevekare neAirPlay 2.
Tim Cook anodzivirira chiito chaApple uye anofunga kuti Apple ecosystem yatarirwa pasi
Tim Cook anodzivirira chiito chaApple uye anofunga kuti Apple ecosystem yatarirwa pasi. Tim Cook anopa kubvunzurudzwa kuCNBC
Mhete Inovhura Door Kuona Cam, Kuisazve Imba Kudzivirirwa Makamera
Mhete Inovhura Door Kuona Cam, Kuedzazve Kumba Kudzivirirwa Makamera
Podcast 10 × 14: Isu tinotaura nezve Apocalypse Apple
Podcast 10x14: Isu Tinotaura Nezve Apocalypse Apple
Kufungidzira kwemari, kutenga kuJapan, tsamba yaCook uye zvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Goredzva Rakanaka 2019 munhu wese!
Vanoongorora vanofungidzira Apple ichave iri inokurumidza kukura tech tech mu2019
Vaongorori vanofungidzira kuti Apple ichave iyo tekinoroji kambani inokura zvakanyanya pamusika wemasheya mu2019, zvichibva pakutengeswa kwemasevhisi uye chiratidzo kune mutengi.
Izvi zvakakosha zvinoshandiswa kana iwe uine Mac nyowani
Aya mashandisiro akakosha kana iwe uri mutsva kuMac.Dhijitari dhizaini, zvemukati kuwiriranisa, vhidhiyo uye odhiyo mutambi.
Chikwata cheSoy de Mac chinokushuvira Kisimusi yakanaka
PhotoScape X pikicha yemufananidzo inovandudzwa neakakosha maficha maficha
Iyo PhotoScape X pikicha yemupepeti inovandudzwa nezvakakosha maficha maficha zvine chekuita nemasefa, mapoinzi enongedzo uye nekuvandudza kune zvazvino mabasa
Safari Technology Preview 72 yave kuwanikwa
T2 Chip inodzivirira maMac kubva kuhunyengeri hwekuwana password
Iyo T2 Chip inodzivirira maMac kubva kuhunyengeri hwekuedza kuwana password, ichivharira zvishoma nezvishoma sisitimu.
Mumwe munhu akabhadhara madhora zviuru zvitanhatu zvebhizinesi reSteve Jobs uye siginecha yemagazini
Kadhi rekare rebhizinesi raSteve Jobs rakatengeswa kuRR Auction kweinopfuura madhora zviuru zvitanhatu. Tsvaga pano!
Dzima Autoplay yemavhidhiyo muMac App Store
Dzima Autoplay yemavhidhiyo muMac App Store. Kubva pane zvaunofarira unogona kudzima iyi sarudzo uye chengeta data.
Kana iwe ukashandisa OS X Yosemite, usagadzirise kune yazvino vhezheni yeTunes
OneNote yeMac ikozvino inowirirana neiyo Kubata Bar
OneNote yeMac yatove inowirirana neiyo Bata Bhawa.Mabasa eTouch Bar anoenderana nechikamu cheiyo interface patiri.
Podcast 10 × 12: Shamwari kana Vavengi?
Podcast 10x12: Shamwari kana Vavengi?
Maitiro ekuziva kana iwe uine zvakavanzika kubhurawuza zvinogoneswa muSafari neMojave yakasviba modhi
Maitiro ekuziva kana iwe uine zvakavanzika kubhurawuza zvinogoneswa muSafari neMojave yakasviba modhi. Isu tinokudzidzisa iwe kusiyanisa icho
AUKEY inopa majaja ayo matsva nekuchaja nekukurumidza GaNFast
AUKEY yazivisa matatu akurumidze, anodhura uye asingadhuri GaNFast inokurumidza kuchaja majaja, anowanikwa kubva munaNdira. Vazvizive pano!
macOS 10.14.2, Kuo nezvakafanotaurwa, Macbook Mhepo kamera uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Apple inopemberera mazororo nekurarama kuita kwe'Regai iende 'paIyo isingagumi Loop muCupertino
Apple yakadzinga mhemberero nehupenyu hwekuita kwekuti 'Ngazviende' naIdina Menzel kumahofisi eInfinite Loop Cupertino.
Kubva kuSystem 7 kusvika macOS Mojave: famba udzoke munguva nemapikicha kubva kune ese mavhezheni e macOS
Tsvaga pano shanduko dzese dzatave kuona muApple Wallpaper kana mapikicha, kubva kuSystem 7 kusvika kuMacOS Mojave. Dhawunirodha mahara.
Ikea inotangisa Trådfri smart plugs ayo anoenderana neHomekit mune ramangwana. Ikea mhinduro dzekugadzirisa imba ndeimwe yemitengo inodhura
Simudzira yako 21-inch iMac kubva 2017 kusvika 64GB ye RAM nekutenda kune OWC
Simudzira yako 21-inch iMac kubva 2017 kusvika 64GB ye RAM nekutenda kune OWC. Mutengo weiyo yakatarwa i € 895 yakadzika kwazvo kupfuura mutengo weApple
Bvisa kunetsa kurira ruzha kubva kuMac yako, neKrisp yeMacOS
Bvisa inogumburisa kufona ruzha kubva kuMac yako neKrisp yeMacOS. Kuombera uye ruzha rukuru zvinonyangarika mukukurukurirana
Microsoft inodarika Apple sekambani inonyanya kukosha
Microsoft inodarika Apple sekambani inonyanya kukosha, maererano nemusika capitalization wemaawa ekupedzisira.
Tichaona Mac mamodheru aine imwechete processor iripo?
Tichaona Mac mamodheru aine imwechete processor iripo? Kukurukurirana nezveramangwana revaprosesa muMac uye kuiswa kweimwe modhi muMacBook Air
10x10 Podcast: Siri vs Alexa vs Google Mubatsiri
Sangana neRAW Power 2.0 seimwe nzira yeiyo Mifananidzo app
Sangana neRAW Power 2.0 seimwe nzira yeiyo Mifananidzo app. Iwo mabasa anogona kushandiswa muApp kana kubva kuFotos yekuwedzera yeMac
Apple inoburitsa yechipiri beta yewatchOS 5.1.2 uye yechitatu beta yeTVOS 12.1.1 yevagadziri
Apple inoburitsa yechipiri beta yewatchOS 5.1.2 uye yechitatu beta yeTVOS 12.1.1 yevagadziri, vhiki mushure meyekupedzisira betas yaburitswa.
Maitiro ekudhawunirodha font yeSan Francisco yeMac
Apple inotipa mukana wekunotora fonti yeSan Francisco, iyo font inoshandiswa natively muSS.OO. kubva kuApple.
Chitoro cheApple muThailand ndechekuti: "Kutaurwa kwakanakisa kwezvose zviri kuitwa naApple"
Apple Store yeThailand ndeiyi: "Kutaura kwakanyanya kwese kuri kuitwa neApple," sekureva kwaAngel Ahrendts, nemagadzirirwo eIve uye Nhasi kuApple zviitiko
Tinogona here kushandisa iyo nyowani MacBook Air retina kugadzirisa neFinal Cut?
Tinogona here kushandisa iyo nyowani MacBook Air retina kugadzirisa neFinal Cut? YouTuber Kraig Adams akaita bvunzo achishandisa yakakurumbira Apple mupepeti
Nyowani AirPods padhuze mushure mekugamuchira Bluetooth SIG certification
Iyo nyowani AirPods padhuze mushure mekugamuchira Bluetooth SIG chitupa. AirPods ichave neBluetooth 5.0 iyo inobvumidza kuita kuri nani
Goverana mifananidzo yako yakachengetwa muMifananidzo yeMacOS nemumwe munhu
Goverana mapikicha ako akachengetwa muMifananidzo yeMacOS nemumwe munhu, vangave vaine zvigadzirwa zveApple kana kwete, mumatanho mashoma
Southlake Apple Store inovhura mushure mekugadziriswa, munguva yezvigadzirwa zveKeynote
Southlake Apple Store inovhura mushure mekugadziriswa, munguva yezvigadzirwa zveKeynote, zvatinozoona kutanga Mbudzi 7.
15-inch MacBook Pros ichave nekugadzirisa kutsva neRadeon Pro Vega mifananidzo
Iyo 15-inch MacBook Pros ichave nemagadzirirwo matsva neRadeon Pro Vega mifananidzo, iyo ichapa kusvika ku60% kumwe kuita.
10 × 8 Podcast: Nyowani iPad Pro, MacBook Mhepo uye Mac mini
10x8 Podcast: Nyowani iPad Pro, MacBook Mhepo uye Mac mini
Tanga iyo yakakosha yeiyo nyowani Mac uye iPad Pro nenguva
Apple yakamisa kuwedzera kweApple Stores muChina nekuda kweye red tape uye kubiridzira
Apple yakadzora kuwedzera kweApple Stores muChina nekuda kweye red tape uye kubiridzira. Iyo kambani yakadzora pasi Apple chitoro kuvhurika.
Snap inotangisa Snap Kamera ye macOS ine Twitch, Skype uye Youtube kusangana. Inosanganisira marita uye wechitatu mafirita uye lenzi.
Apple ichavhura yayo yekutanga Apple Store muBangkok munaNovember 10
Apple ichavhura chitoro chayo chekutanga muBangkok munaNovember 10. Chivakwa chakasarudzika muchimiro chepa pagoda. Isu tinowana Apple chiratidzo mugoridhe
MacBook Mhepo kunonoka kuodha, taura mhando itsva kutanga Gumiguru
MacBook Mhepo kunonoka kuodha zvinoratidza mhando nyowani kutanga Gumiguru 30, sekuenderana neemail yakatumirwa neApple kumutengi
Intel haina chinangwa chekusiya kugadzirwa kwe10nm machipisi
Intel haina chinangwa chekusiya kugadzirwa kwe10 nm machipisi, mumashoko e CEO wayo Bob Swam. Iva zvazvingaita, 10nm machipisi ari muna 2019
Mamwe makwikwi eiyo HomePod. Amazon Echo smart speaker vanogona ikozvino kuchengetedzwa muSpain
Iyo AirPower inosvika, chero panokwira zuva
Iyo AirPower ichaenderera ichitengeswa uye Apple ichaisa zvese zvairi kuyedza mukati mayo
Bhingo! Apple yatanga kutumira kukoka kweKeynote nyowani yaGumiguru 30
Nyowani Keynote yaGumiguru 30 umo tichaona iyo nyowani iPad uye nyowani MacBook
Apple kuunza Mac neARM muna 2020 kana 2021 zvinoenderana naMing-Chi Kuo
Apple ichaunza Mac neARM muna 2020 kana 2021 zvinoenderana naMing-Chi Kuo. Kana iyo nhau ikasimbiswa, iko kwakakosha shanduko ichatanga nemapoka asina simba.
Ane makore mana kubva paMac mini kugadzirisa
Pave nemakore mana kubva paMac mini kugadzirisa. Vakakurumbira vaongorori vanotarisira kuti Mac mini kusimudzira kune yehunyanzvi chikamu
Podcast 10 × 06: Kusiya Runhare Kumba
Paul Allen, mubatsiri pamwe neMicrosoft, anofa aine 65
Apple inonzi yakatenga Asaii, yekunyepedzera njere chikuva chemimhanzi, icho chichavandudza Apple Music's mimhanzi inokurudzira injini
Apple inofanirwa kufamba vhiki rino kana kana kana uye kana ukaronga kuita chiitiko chitsva ...
Luminar yeMacOS ichavandudzwa nemabasa matsva ekuvandudza matenga, mune yekuvandudza yatichaona munaNovember 1
Iyo Sonos application yeMac yakagadziridzwa, asi iine mashoma mashandiro
Iyo Sonos application yeMac yakagadziridzwa, asi ichibvisa mabasa mushanduro ye mac uye windows, ichikunda mashandiro muIOS
Rongedza iyo bar yemenu mu macOS Mojave
Rongedza iyo bar yemenu mu macOS Mojave. Maitiro ekuronga mifananidzo, bvisa uye udzorere zviri nyore.
Chichava chiitiko chaApple chaOctober kutizivisa kune iyo iPad kana Macbook?
Iyo nyowani iPad Pro inogona kuve neanogona mashandiro eMacBook
XLD odhiyo inoshandura inovandudzwa kune macOS Mojave
XLD odhiyo inoshandura inovandudzwa kune macOS Mojave, nerutsigiro rwe64-bit, Mojave inodikanwa uye yakasviba modhi
Iyo cable opareta BT inogona kushandisa iyo Apple TV 4k sedhisodhi
Iyo cable opareta BT inogona kushandisa iyo Apple TV 4k sedhodhi, sekureva kweruzivo kubva mupepanhau redhijitari. Apple neBT havana kutaura.
Yechipiri-chizvarwa AirPods inogona kuve nekuzvimiririra kweinopfuura zuva rakazara rekutamba
Isu tinoongorora diki inotakurika dhisiki asi iine 2TB yekukwanisa uye yakakwira yekumhanyisa kumhanya ine USB-C chinongedzo
Carrousel du Louvre's iconic Apple Store yekuvhara zvachose muna Gumiguru 27
Iyo inoshamisira Apple Store muCarrousel du Louvre ichavhara zvachose muna Gumiguru 27 uye chiitiko chayo chichaendeswa kuApple Chitoro paChamps-Élysées
Elegance iri mune sleeve yeMacBook Pro
Yakapfava ruoko sleeve yeApple MacBook Pro malaptop
Iyo BeatsX inodonha mumutengo, modhi nyowani mukuona?
MuCupertino havadi kuti tigadzirise MacBook Pro kana iMac Pro
Podcast 10 × 04: Isu tatova ne "Masuwo" e2018
Mamwe maApple Watch ruzivo rwekuchinjazve nyaya newadhiOS 5.0.1
Apple yakaburitsa inogadziridza yeApple Watch, watchOS 5.0.1, inogadziridza inogadzirisa mamwe matambudziko
La Maquinista ichave yekutanga Apple Store kugadziridzwa kuSpain
La Maquinista ichave yekutanga Apple Store kugadziridzwa kuSpain nematafura nyowani uye hombe skrini yeNhasi kuApple.
Kusvika kweMojave, Apple Watch yakaputika, mabheji matsva uye zvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Kusvika kweMacOS Mojave, Apple Watch yakaputika, mabheji matsva uye zvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Logic Pro X inogadziridzwa nekuwedzera yakakura nhamba yemabasa
Logic Pro X, imwe yeakanakisa maturusi pamusika wekugadzira nekugadzirisa mimhanzi, ichangobva kuvandudzwa ichiwedzera mabasa matsva.
Kufananidza 14 kunovandudzwa uye ikozvino inotsigira macOS Mojave
Iko mashandisiro atinogona kuona akasiyana masisitimu anoshanda pane yedu Mac, Paralles Desktop, ichangobva kuvandudzwa kuti ienderane neMacOS Mojave
Apple Watch Series 4 inoda kuburikidza nedenga: Apple inoshandira wechipiri mugadziri
Apple Watch Series 4 inoda kuburikidza nedenga reimba: Apple inoshandira wechipiri mugadziri Compal Electronics kuti ibatsire zvakanyanya
Iyo Waze app yave kuwanikwa kuCarPlay
Apple inodzora nekutadza iyo yekudonha sensor yeApple Watch Series 4 kunze kwekunge iwe wakura
Isu tatova nekuparara kweApple Watch Series 4 kubva paruoko rweFixit
iFixit yatobvarura iyo nyowani Apple Warch Series 4 kuti izive zvese zvemukati zvemukati
Yekutanga Mojave-inoenderana maapplication anotanga kurova iyo Mac App Store
Iwo ekutanga manyorerwo anoenderana neMojave anotanga kusvika paMac App Store, iyo nhau yeaya maficha uye yakavandudzwa Mac App Store
"Zvirinani Iwe", iyo nyowani Apple kushambadzira kushambadza iyo nyowani Apple Watch Series 4
Apple inoenderera ichitsikisa zviziviso zveayo matsva Apple Watch Series 4, mune ino vhidhiyo inonzi "Zvirinani Iwe"
Iko itsva Apple Watch Series 4 yakakodzera kutenga?
Apple inogadzirisa chikwereti chemamirioni gumi nematatu emitero neIreland
Apple inogadzirisa chikwereti chemamirioni gumi nematatu emitero neIreland pamwe nemitero inoenderana. Ireland neApple vachakwidza sarudzo.
Apple inoburitsa vhezheni 12.0 yeSafari yeMac
pple inoburitsa vhezheni 12.0 yeMac ine yakakosha nhau ine chekuita nekuchengetedzeka, kugadzirisa uye kugadzirisa kwechiitiko chevatengi
Iyo Apple Watch Series 4 inogona kunge iri "shanduko" maererano naJony Ive, uyo akapa hurukuro munaGunyana 13. Akataura nezve Apple Watch
Apple inopa $ 1 miriyoni kuRed Cross yeHurricane Florence
Chinja uye bvisa odhiyo zviri nyore neThe Audio Converter ye macOS. Ichi chishandiso chinoshandura mafaera pane ekuvandudza maseva.
Maitiro ekuparadza nekudzima iyo Apple Tarisa izvozvi kuti tiri kuzotenga Series 4
unpair uye bvisa Apple Watch
Saka ndiwo mamwe mazita eiyo iPhone nyowani
Bvisa screen Rechokwadi Tone chimiro mune macOS Yakakwira Sierra
Iyo 2018 MacBook Pro ndiyo yekutanga Mac kuratidza Kuratidzira Kwechokwadi, kunyangwe Apple ichizogadzira akawanda anotevera epakati-renji maMac.Dzvinyirira iyo yekuratidzira True Tone chimiro muMacOS High Sierra nekuwana system zvido uye nekudzvanya pane inoenderana sarudzo.
AirPods 2.0 ingaite sei
Izvo zvave zvevakawanda zvisikwa zvakanakisa zveApple mumakore. Pakupedzisira chigadzirwa chitsva, chinounza nemashiripiti ayo atinogara tichiti kubva kuApple kubva kuAirPods 2.0 inogona kuve, hunhu hwavanenge vainahwo uye nechaji yekutakura yavanogona kutakura, pakati pezvisingazivikanwe zveAirPods.
Mashandisiro aungaita yako yekare Mac yeiyo Nguva Capsule-maitiro backups
Nekuda kwehunhu hweMac makomputa, tinogona kuvashandisa kwenguva yakareba. Kunyangwe isiri mumutsara wepamberi wehondo, Mac ine makore akati wandei ekuti Ungashandise sei yako yekare Mac kune Nguva Capsule-maitiro mabhakiti, uchigadzira backup makopi pasina kubatanidza chero diski kune yako Mac
Chrome ichangoburwa kuita inosanganisira Mufananidzo mune Mufananidzo sarudzo
Bhurawuza reGoogle ririkugadzira makwikwi ehunhu kuti ive nzvimbo yakanaka yeSafari yeMac. Svondo rino takagamuchira kushanda kweChannel kunosanganisira iyo Sarudzo muPikicha sarudzo, asi pane izvi isu tinofanirwa kuisa mirairo miviri mubara rekero.
10 × 1 Podcast: Kumirira Keynote
Nezuro husiku takatanga nemwaka wegumi we # podcastapple uye nazvo zvese zvinoita kunge zvinodzoka ku ...
Zvishoma nezvishoma Apple iri kupa iyo yakasvibira mwenje kune dzimwe mari uye mune ino kesi yaive yakahwina ...
Apple Chiitiko app paApple TV inogadziridza yechakakosha
Kwangosara mazuva mashoma ehurukuro yeApple, kunyanya musi waGunyana 12. Aya marudzi ezviitiko anotepfenyurwa mukushambadzira neApple muApple Chiitiko chishandiso cheApple TV inogadzirisirwa chirevo chikuru chichaitwa munaGunyana 12 paSteve Jobs Theatre muCupertino
Rangarira zvaunofanirwa kuita kana ukatenga pendrive nyowani ye macOS neWindows!
Chimwe chezvinhu izvo zvandinosangana nazvo nguva dzese kosi painotanga vazhinji vatinoshanda navo ...
Simbisa Bluetooth odhiyo pane yako Mac, kumanikidza aptX kana AAC codec
Iko kunaka kweBluetooth odhiyo kutenderera kwakavandudza zvakanyanya mumakore achangopfuura. Kusvikira nhasi, kurasikirwa kungasaonekwa chero bedzi isu Tavandudza odhiyo pamusoro peBluetooth paMac yako, kumanikidza aptX kana AAC codec, kuti uwane mhando yekurira mukutamba kwekuteerera.
Apple Keynote, macOS betas, Intel processor, uye nezvimwe. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Pasina mubvunzo nhau dzakatanhamara dzekuti ndinobva kuMac uye nevamwe vezvenhau vanozivikanwa muApple ...
Nyowani Samsung inotakurika SSD ine NVMe tekinoroji uye kumhanya inosvika ku2.800Mb / s
Zvizhinji zveindasitiri zvakanangana nemaMacs nekutakurika kukuru, asi panguva imwechete iyo yavanogona kuita seMasimba-epamusoro Mac senge Samsung itsva inotakurika SSD neNVMe tekinoroji uye nekumhanyisa inosvika ku2.800Mb / s mune kuverenga uye 2300Mb / s pakunyora. Yekutanga yekunze SSD ine tekinoroji yeNVMe
Iyo inozivikanwa Reeder 3 RSS muverengi inova yemahara
Nhau kana varavi vekuburitsa vakabudirira kwazvo makore apfuura. Iyo nzira yekuziviswa nezvenhau dzako dzemasevhisi, kana zvaunofarira zveReder yakakurumbira 3 RSS muverengi inova yemahara neinhasi yekuvandudza. Zvinotaridza kuti iko kunyorera kwamiswa.
Dhizaini manotsi app pakupedzisira inouya kune macOS
Kufungidzira kukuru kuri kugadzira kusvika kweDrafti kuMac. Imwe yeakatanga kunyorera kurovera pamusika wekutora manotsi kubva kuIOS, ichapa iyo Drafti manotsi kunyorera pakupedzisira inosvika paMacOS. Kunyangwe zvisiri zvese maficha anotarisirwa kusvika mukutanga kuburitswa, ivo vanosvika nekukurumidza
Maitiro ekujekesa iyo Quick Tarisa cache pane macOS
Ndiani asingazive Kuratidzika Kutarisa, ndiro basa reMacOS iro rinotibvumidza kuti tiwane kukurumidza kuona iyo faira: odhiyo, mufananidzo, vhidhiyo kana gwaro, iine Dzidziso yakadai yekubvisa Quick Tarisa cache mune macOS, dhairekitori. inowanikwa iko kwese macache macache anowanikwa uye akajekeswa
MacOS Mojave inobvisa Kudzokera kuMy Mac uye inokurudzira dzimwe nzira
Iyo Kudzokera kuMy Mac chinhu chinowanikwa mune macOS anoshanda masisitimu kubva kuOS X Shumba ichanyangarika mu macOS Mojave. Mamwe mablog anoitora macOS Mojave inobvisa Kudzokera kuMac yangu uye inokurudzira dzimwe nzira, senge Apple Desktop Remote, iCloud Drive kana kugovana skrini
Maapplication emacOS ane anodarika 50% kuderedzwa paBundleHunt
Iyo nzira yekunyorera yekushandisa komputa iri kuwedzera kusimbiswa. NeProsesa neCons, inoita kuti iwe ugone kuwana rwizi rwakadzikama rweApplication macOS pane anopfuura makumi mashanu muzana kubviswa neBundleHunt Zhizha Rekutengesa. Neye kupihwa, kuwana yako catalog kunotitorera madhora mashanu
Tora iyo 10 Gb kumhanya kweMac pane chero Mac yekutenda kune OWC adapter
Vashandisi vanogadzirisa huwandu hweruzivo pane network vane mhanza, nekuda kweadapter iyo iyo OWC yakasimba ichangotanga pamusika. Tora iyo 10 Gb / s kumhanya kweMac pane chero Mac yekutenda kune OWC adapter, iyo yatinoziva seThunderbolt 3 10G Ethernet Adapter.
Iyo ARM chip gakava inotangazve paMacs
Kwemakore akati wandei pakave nekukakavadzana kwakanyanya nezve mukana wekuona maMac ane maARM machipisi. Apple haisati yambotonga pamusoro payo, asi zano Iyo nharo pamusoro pekureruka kweArm machip muMacs inotangazve, ichizivisa iyo kambani kuti vanogona kuenderana neIntel mukuita
Gadzira iyo toolbar yeSafari pane macOS
MacOS zvinoshandiswa hazvizivikanwe nenhamba yakakura yekushandurwa, asi kunyangwe zvakadaro, ivo vane zvese zvinodiwa uye izvi Dzidza maitiro ekugadzirisa iyo Safari toolbar mu macOS, uine mashoma matanho akareruka, kuti uigadzirise kune zvaunofarira
Yekupemberera makumi maviri eMac
Zuva rakasarudzwa naApple raive Nyamavhuvhu 15, 1998, kushambadza imwe yeakakosha maMac anozivikanwa. Iyi modhi yakanga isina chekuita nazvo.Makumi maviri emakore apfuura kubvira iyo iMac yekutanga yakatangwa pamusika. G20 modhi, mune yakajeka mavara uye yakajeka mapurasitiki ayo anotendera iwe kuti uone mukati.
Iyo Orlando Park neIrvine chitoro chinoshandura nzvimbo musi waAugust 18
Mukugadzirisa patsva kweApple Chitoro pasirese, ikozvino yave nguva yekuchinja chitoro cheIrvine muLos Angeles, pamwe neOrlando Park, iyo ichafambisa Iyo Orlando Park neIrvine chitoro, inoshandura nzvimbo musi waAugust 18 nenzvimbo dzakakura, dzakashandurwa kune zvitsva zvinodiwa neApple
Chinja vara rePodPod yako nerudzi urwu rwekushandisa «media»
Iyo HomePod haisati yatengeswa kuSpain asi vazhinji vedu tanga tichizvitsvaga muhupenyu ...
Heano maitiro ekutarisa bhatiri chimiro cheMac accessories
Kwechinguva, izvo zvishandiso izvo zvatinowanzo shandisa muMac, seMicrosoft Keyboard, Trackpad kana Magic Mouse, zvine Iyi nzira yatinotarisa mamiriro ebhatiri eMac accessories, tichiwana kumisikidzwa kwayo kubva kuZvaunoda zvehurongwa.
Iyi ndiyo nyowani Dock Echo 11 yeThunderbolt 3 ine USB-C
Sonnet yazivisa kuvhurwa kweDock nyowani inonzi Echo 11 Thunderbolt 3 iyo inogona kubatanidza ...
Apple inoburitsa yechishanu beta ye macOS 10.14 Mojave yevagadziri
Tiri pamasuwo emwedzi waNyamavhuvhu uye maMojave betas anofanira kutanga kunatsiridzwa, kana pangangove nemwedzi nehafu yasara kusvikira Apple yatanga beta yechishanu ye macOS 10.14 Mojave yevagadziri vane sarudzo nyowani mu kuiswa kweiyo betas.
Grovemade inotiunzira hwaro hweMicrosoft Keyboard
Grovemade inozivikanwa inozivikanwa yekushandisa, apo chikamu chakakosha cheayo zvigadzirwa zvimire zvekhibhodi. Iyo Apple Magic Kiyibhodhi ndeye Grovemade inotitorera isu hwaro hwehuni hweMicrosoft Keyboard kune ese akajairika keyboard uye ine nhamba yekhibhodi
Maawa mushure mekuvhurwa kwechitoro muMilan, iyo Cupertino kambani yakaburitsa akati wandei emifananidzo ...
Kusvikira nhasi, iyo Mac mini ikombuta yeApple iyo isina kuvandudzwa kwenguva refu, kunyangwe kuora mwoyo kwevamwe vashandisi kuti Intel ichave yakagadzirira mapurosesa matsva eMac mini, nekuburitswa kweIntel Bean processor Canyon.